Somaliland: Bulshada Degaannada Abdaal, Xamaas, Daragodleh iyo Xabaalo Tumaalood oo Si Weyn usoo dhoweeyey Musharraxa Madaxweyne ee Xisbiga Ucid oo Gudbiyey Farriinta Qaadashada Kaadhka Codeynta - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Bulshada Degaannada Abdaal, Xamaas, Daragodleh iyo Xabaalo Tumaalood oo Si Weyn...
Wefti ballaadhan oo uu hoggaamiyo Musharraxa Xilka madaxweyne ee Xisbiga Ucid Jamaal Cali Xuseen oo ay wehelinayaan Gudoomiyaha Xisbiga ee Gobolka saaxil Marwo Rooda Axmed yaasin, masuuliyiin ka tirsan golaha dhexe, masuuliyiin kale, ayaa saaka u baxay inay soo indho-indheeyo habsami u socodka diiwaangelinta ka socota Gobolka Saaxil ayaa soo dhoweyn ballaadhan oo aan loo kala hadhin kala kulmay Degmada Sheekh Abdaal oo ka tirsan gobolka Saaxil.
Dadweyne boqolaal ah ayaa Musharraxa madaxweyne ee Xisbiga Ucid, kusoo dhoweeyey astaanta xisbiga iyo sidoo kale, duco ay Ilahay u weydiinayan inuu xilka ugu dhiibo. Waxa kaloo, uu musharraxa madaxweyne ee Xisbiga Md. Jamaal cali xuseen dadka ku dhaqan degmada sheekh abdaal ku guubaabiyey inay qaatan kaadhka diiwaangelinta Codbixiyaha si ay u muujiyan xuquuqda ah inay Codeeyan.
Sidoo kale, tuulada Xamaas ayaa iyana uu si ballaadhan loogu soo dhoweeyey Musharraxa Madaxweyne ee Xisbiga Ucid Jamaal cali xuseen, waxanu soo indho-indheeyey goobaha diiwaangelinta, isagoo dadka ku booriyey inay qaatan kaadhka diiwangelinta codbixiyaha.
Waftiga uu hoggaamiyo Musharraxa xilka madaxweyne ee Xisbiga Ucid Md. Jamaal waxa sidoo kale, waxa iyana lagusoo dhoweeyey magaalada Daragodleh, halkaasoo uu Musharraxa Madaxweyne Ucid Jamaal Cali Xuseen dadka si weyn ugu guubaabiyey inay qaatan kaadhka diiwangelinta si ay hadhow ay Codkooda ugu hagar baxaan.
Geesta kale, maagalada Xamaalo Tumaalood ayaa kamid ahayd meelaha sida weyn loogu soo dhoweeyey waftiga uu hoggamiyo Musharraxa Xilka madaxweyne ee Xisbiga Ucid Jamaal cali xuseen, waxanu sidii cadada u ahayd uu dadweynaha u gudbiyey farrintiisii ku aadaneyd sidii dadka ku dhaqan gobolka saaxil tuulo kasta iyo mee walba ay u qaadan laaheen kaadhka codeynta. Si kastaba ha ahaatee, waxanu idiin gudbin doona wacdaro kaloo ka dhacay degmada Berbera
Somaliland: The city of twenty five mayors (Hargeisa) – by Abokor Omer
Wargane Tv: Axmed cabdi dheere oo khubad dhinacyo badan tabaneysa u jeediyey qurba jooga